VAIA400 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၄၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 400
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA400
Are you looking foragenuine, quality water purification product? 400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System with the latest RO water purification technology 2018 will surely make you satisfied.
စစ်မှန်ပြီး ကွာလတီကောင်းတဲ့ ရေစစ်ကို ရှာဖွေနေပါသလား။ 400LPH VAIA400 ရေစစ်က ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာဖြစ်တဲ့ RO ရေသန့်စနစ်ကို သုံးထားတာဖြစ်လို့ သင်စိတ်ကျေနပ်နိုင်မှာပါ။
One of the smartest water purification products with components system mainly imported from advanced countries such as the UK, USA, Netherlands, Italy, Japan ... and assembled at Viet An's factory in the Industry Quang Minh- Me Linh, Hanoi with an area of more than 10,000m2 byateam of technicians with many years of experience in the water purification industry of Viet An Company.
ဒီစက်က ခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ UK USA နယ်သာလန် အီတလီ ဂျပန် စတဲ့ နိုင်ငံများမှ တင်သွင်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ဧရိယာ ၁၀၀၀၀ စတုရန်းမီတာ ရှိတဲ့ Quang Minh- Me Linh, Hanoi တို့မှ စက်ရုံမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ နည်းပညာရှင်အဖွဲ့က တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
When using the inox autovalve of 400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System, you will haveapure water source that meets the standards, no longer have to worry about whether the water quality you use is guaranteed or not. The VAIA400 assembly process always ensures ISO 9001:2015, which is also one of the few industrial water purification products that are exclusively registered with the VA, USApec brands No. 250969 and 250970 at the Department of Intellectual Property of Vietnam .
400LPH VAIA 400 ရေစစ်စနစ်ရဲ့ အော်တိုစနစ်ကို သုံးမယ်ဆိုရင် ရေရဲ့ ကွာလတီက အာမခံချက်ရှိရဲ့လားဆိုတာ စိုးရိမ်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ VAIA 400 ရဲ့ တပ်ဆင်ထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီပြီး ဗီယက်နမ် မူပိုင်ခွင့်ရုံးရဲ့ VA,USApec ကုန်ပစစ္စည်းတံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉၊ ၂၅၀၉၇၀ တို့ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်။
With the ability to quickly filter water, the output water quality meets the pure standards that the 400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System using the stainless steel autovan column is considered the No. 1 water purification product in Vietnam. and qualified for export to Asean countries
ရေစစ်တဲ့ မြန်တာကြောင့် အပြင်ရေကွာလတီက ရေသန့်စံနှုန်းနဲ့ ညီပါတယ်။ စတိန်းလက်စ်စတီး အော်တိုအဆို့ကော်လမ်ကို အသုံးပြုထားတဲ့ 400LPH VAIA400 ရေစစ်စနစ်က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို တင်သွင်းဖို့ အရည်အသွေးပြည့်မီပါတယ်။
Join Viet An to learn about the 400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System through the article below to see why you should use this industrial water purifier instead of using other conventional water purification products on the market.
အောက်က ဆောင်းပါးကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်က အခြားရေစစ်တွေထက် ဘာကြောင့် 400LPH VAIA400 ရေစစ်ကို အသုံးပြုသင့်လဲဆိုတာကို သိလာနိုင်မှာပါ။
6 Benefits when you use Viet An's 400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System
Viet An ရဲ့ 400LPH VAIA 400 ကို အသုံးပြုသည့်အခါ ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူး ၆ ခု
1. Have the smartest water purification system in hand today. With the filter capacity of up to 400 liters of purified water per hour of VAIA400 water treatment and filtration system, you can serve the needs of eating, drinking and living of the whole family. In addition, you can also openasmall-scale bottled and bottled water facility to increase family income. There are many people who, due to their limited capital, choose to start from these 400-liter water purification products and have succeeded. Would you like to beabusiness owner of bottled water today? If you want, it's simple, just contact Viet An to experience using VAIA400 water purification products.
စမတ်အကျဆုံး ရေစစ်စနစ်ကို ယနေ့ပဲ ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ တစ်နာရီမှာ ၄၀၀ လီတာ စစ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်ကြောင့် မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့ အစားအသောက် နေထိုင်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သင့်မိသားစုရဲ့ ဝင်ငွေအတွက် ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်း အသေးစား လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်းငွေပေါ်မူတည်ပြီး ၄၀၀ လီတာရေသန့်တွေကစပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ရော ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဖြစ်ချင်ပါသလား? တကယ်လို့ အဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် VAIA400 ရေသန့် ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုဖို့ Viet An ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
2. 400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System uses high-grade 304 stainless steel filter column. With resistance to environmental corrosion, no oxidation, discoloration, rust, and extreme weather conditions, the stainless steel water filter column is super material. durable. The life of the stainless steel water filter column is much higher than that of the main composite water filter, so their cost is also higher. The surface of the 304 stainless steel water filter used in the filtration system, producing pure water 400 liters / h, VAIA400 is always shiny, so it is easy to clean. Stainless steel material is also absolutely safe, so it is widely used in water purification products. Because of its high durability, safety and aesthetics, water purification products using the stainless steel autovan filter are not only used by many people in the country but also trusted by many foreign customers.
400LPH VAIA400 ရေစစ်က အဆင့်မြင့် 304 စတိန်းလက်စ်စတီးကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တိုက်စားခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်းတို့ မရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် စတိန်းလက်စ်စတီးက စူပါ အကြမ်းခံနိုင်တဲ့ သတ္တုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စတိန်းလက်စ်စတီးရေစစ်ကော်လမ်က အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေထက် ဈေးကြီးသောကြောင့် ရေစစ်ကလည်း ဈေးပိုကြီးပါတယ်။ တစ်နာရီမှာ ၄၀၀ လီတာ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ရေစစ်စနစ်မှာသုံးတဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီးရဲ့ မျက်နှာပြင်က အမြဲတောက်ပနေပြီး သန့်ရှင်းရလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ လှပ လုံခြုံ ကြာရှည်ခံတဲ့အတွက် စတိန်းလက်စ်စတီးကို အသုံးပြုထားတဲ့ ရေစစ်ကို ပြည်တွင်းကလူတွေသာမက ပြည်ပက ဝယ်ယူသူများကပါ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
3. The water filtration process is completely automatic, closed thanks to the automatic valve system mounted on the filter columns. On each automatic valve, there isaPLC screen showing water flow parameters, filtered water and they will automatically adjust the filter column washing time to remove the residue on the filter materials in the filter column. to protect the filter element, protect the filter. It has contributed to saving labor costs and ensuring the stability of the quality of filtered water, the taste of the output water. This is the advantage of the automatic valve line compared to the current mechanical valves.
ရေစစ်ကော်လမ်တွေပေါ်က အော်တိုအဆို့စနစ်ကြောင့် ရေစစ်လုပ်ငန်းက အော်တိုဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို အဆို့တစ်ခုစီမှာ ရေစီးဆင်းသော ပါရာမီတာ၊ စစ်ထုတ်ထားသော ရေများကို ပြတဲ့ PLC စခရင်ရှိပြီး သူတို့က ရေစစ်ထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကာကွယ်ရန် အကြွင်းအကျန်တွေကို ဆေးကြောတဲ့ အချိန်ကို အော်တိုညှိပေးပါတယ်။ ဒါက အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ပြီး စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ရေရဲ့ ကွာလတီကို အာမခံနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်က စက်သုံးအဆို့တွေထက် အော်တိုအဆို့တွေရဲ့ ကောင်းကျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
4. The 400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System applies the latest RO water purification technology in 2018, with the ability to remove up to 99.9% of impurities, residue, toxins, bacteria, virust out of The water for the output water ensuresapure standard, this system also retains essential minerals for the body in the water thanks to the mineral supplement system. With this system, you will have super clean, healthy water. So what are you waiting for without choosing to use this water purification product today.
400LPH VAIA400 ရေစစ်က ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံးသော RO ရေစစ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၉၉%သော အညစ်အကြေး၊ အကြွင်းအကျန်၊ အဆိပ်အတောက်၊ ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ အပြင်က ရေက သန့်ရှင်းမှုကို သေချာစေပြီး ဖြည့်စွက်စနစ်ကြောင့် ရေထဲမှ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တွေကို သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ ဒါဆို ဘာကြောင့် ဒီရေစစ်ကို ဝယ်ယူဖို့ စောင့်နေသေးတာလဲ။
5. The filter system has the most intelligent control panel, capable of warning when there is an incident such as insufficient source water flow, unstable power supply capacity ... The system will automatically disconnect when something goes wrong. This contributes to the safety of the water purification process, and also helps to protect the life of the industrial filter.
ရေစစ်စနစ်မှာ မလုံလောက်တဲ့ ရေစီးဆင်းမှု၊ မတည်ငြိမ်တဲ့ ပါဝါပေးပို့မှု စတဲ့ ပြသနာတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါ သတိပေးမယ့် အကောင်းဆုံးသော ထိန်းချုပ်ဘောင် ပါရှိပါတယ်။ တစုံတရာ ပြသနာပေါ်ပေါက်ပါက စနစ်က အော်တို ရပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လုံခြုံမှုရှိပြီး ရေစစ်ရဲ့ သက်တမ်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
6. 400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System is exclusively distributed by Viet An General Trading Joint Stock Company - the No. 1 unit in Vietnam in terms of importing and distributing water purification lines, filling machines, bottle blowing machines. and manufacture of ice machines. When buying this product in Viet An, you will enjoy super preferential policies, which are:
+ Free shipping nationwide.
+ Lifetime maintenance of the system
400LPH VAIA400 ရေစစ်စနစ်ကို ဗီယက်နမ်မှာ ရေစစ်လိုင်တွေ၊ လောင်းဖြည့်စက်တွေ၊ ဘူးလေမှုတ်စက်တွေကို တင်သွင်းဖြန့်ချီတဲ့ နေရာမှာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်တဲ့ Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ချီပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါ ပေါ်လစီတွေ ခံစားခွင့် ရမှာပါ။
+တစ်နိုင်ငံလုံး အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသည်
+၁၂ လ အာမခံချက်
Quotation for 400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System provided by Viet An Company
Viet An ကုမ္ပဏီမှ 400LPH VAIA400 ရေစစ်စနစ်အတွက် လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်
Poor quality, fake, and counterfeit products of Viet An industrial water purification systems have been appeared on the market, thus affecting the interests of consumers as well as to the reputation of our company.
ဈေးကွက်မှာ Viet An မှ စက်ရုံသုံး ရေသန့်စနစ်လိုမျိုး ကွာလတီမမီတဲ့ ပစ္စည်းအတုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါက ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနိုင်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
To avoid buying fake and counterfeit goods, you should go directly to Viet An's branches at:
ပစ္စည်းအတုတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ Viet An ရဲ့ ရုံးခွဲတွေကို တိုက်ရိုက်သွားဝယ်သင့်ပါတယ်။
Phone: (024) 36364 999 /(0243) 758 9222
လိပ်စာ- Lot 43D1, လမ်း H2-G2, Quang Minh စက်မှုဇုန်, Me Linh, Hanoi
ဖုန်း-၀၂၄၃ ၆၃၆၄ ၉၉၉ ၊ ၀၂၄၃ ၇၅၉၁ ၇၉၅ဖုန်း-၀၂၄၃ ၆၃၆၄ ၉၉၉ ၊ ၀၂၄၃ ၇၅၉၁ ၇၉၅Hotline-၀၉၄၂ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ၊ ၀၉၄၅ ၁၁၂ ၄၆၈
Ho Chi Minh ရုံးခွဲ
ဟိုခြီမငျးစီးတီး၊ ခရိုငျ ၁၂၊ နံပါတျ ၆၆ ဖူလုံ ၉၊ အနျဖူးဖူးရပျကှကျ
ဖုန်း-၀၈ ၈၈ ၈၁ ၈၁ ၄၁ ၊ ၀၈ ၈၈ ၄၁ ၈၁ ၄၁
Hotline- ၀၉၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ၊ ၀၉၄၂ ၄၁ ၄၁ ၄၁
Address: No. 50 Phan Khoang, Phuoc Ly Resettlement Area, Hoa An, Cam Le District, Danang City.
Da Nang ရုံးခွဲ
လိပ်စာ- No. 50 Phan Khoang, Phuoc Ly ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဧရိယာ, Hoa An, Cam Le
ဖုန်း-၀၂၃၆ ၃၆၈ ၄၁၄၁
Address: No. 87 Phan Huy Chu, Khanh Xuan Ward, Buon Ma Thuot
Buon Ma Thuot ရုံးခွဲ
လိပ်စာ- No. 87 Phan Huy Chu, Khanh Xuan ဆောင်, Buon Ma Thuot
ဖုန်း- ၀၂၆၂ ၃၉၉ ၉၉ ၃၆
Currently, Viet An is supplying to the marketa400LPH VAIA400 Purified Water Filtration System using inox autovalve filter column for VND 87 million. This is the most affordable and cheapest price on the market today foragenuine, high-quality industrial water purification product.
ယခုအခါမှာ Viet An ကုမ္ပဏီမှ အော်တိုအဆို့ကို အသုံးပြုထားသော 400LPH VAIA400 ရေစစ်ကိရိယာကို ဗီယက်နမ်ငွေ ၈၇ သန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ ဒါက စစ်မှန်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ စက်အတွက် အချိုသာဆုံး ဈေးနှုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Once you have decided to choose this VAIA400 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
Hỏi đáp & đánh giá 400LPH VAIA400 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်